‘तरकारीवाली’ लाई अनमोलको हिरोइन बन्ने रहर - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Preeti to unicode Unicode to preeti Exchange Rate Weather
| बुधबार, कार्तिक ३, २०७८
भिडियो ग्यालरी फोटो ग्यालरी
‘तरकारीवाली’ लाई अनमोलको हिरोइन बन्ने रहर
Published On : ६ बैशाख २०७५, बिहीबार १२:५२
बैसाख । त्रिशुली नदीको झोलुङ्गे पुलमा तरकारी बोकेकी युवती कुसुम श्रेष्ठको फोटो पर्यटन व्यावसायी रुपचन्द्र महर्जनले खिचेर फेसबुकमा हालेपछि करीब एक वर्ष अगाडि सामाजिक सञ्जालमा ठूलै हलचल मच्चियो ।
नेपालमा मात्र होइन भारत लगायतका देशमा समेत उक्त तस्बिरले धुम मच्चायो । गाउँकी एक साधारण युवती कुसुम रातारात सेलिब्रेटी बनिन् । दर्जनौं फिल्मबाट अफर आए । म्यूजिक भिडियोको अफर गनिसाध्य छैन । यसैबीच उनले बैशाख २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘लम्फू’ साइन गरिन् ।
‘तरकारीवाली’ को नाम जोडिएकै कारण दिन प्रतिदिन यस फिल्मको हाइट बढ्दो छ । गत बिहीवार फिल्मको ट्रेलर समेत सार्वजनिक भयो । उनी आफ्नो भूमिका छोटो भए पनि राम्रो रहेको सुनाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘राम्रो भूमिका पाएर ‘लम्फू’ गरें । अब दर्शकको प्रतिक्रिया बुझ्न आतुर छु ।’ उनी यो फिल्म रिलिजपछि मात्र अन्य फिल्म गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निधो गर्ने बताउँछिन् ।
कुसुम भन्छिन्, ‘राम्रो फिल्मबाट अफर आएको खण्डमा सोच्ने छु । तर, म आफ्नो अध्ययनलाई भने विश्राम दिएर फिल्म गर्दिनँ । दुबैलाई सँगै अगाडि बढाउँछु ।’ उनी अभिनेता तथा मोडल पुष्प खड्काको ठूलै प्रशंसक हुन् । कोसँग पर्दामा स्क्रिन शेयर गर्ने मन छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले झट्टै उत्तर दिइन्, ‘पुष्प खड्का साह्रै मन पर्छ । मैले उहाँको हरेक भिडियो हेरेको छु । फिल्म ‘मंगलम’ पनि निकै राम्रो लाग्यो । उहाँसँग काम गर्न पाएँ भने नाईँ भन्दिनँ ।’ पुष्प मात्र होइन उनलाई अहिलेका चल्तिका स्टार नायकसँग पनि काम गर्ने ठूलो इच्छा रहेछ । उनी भन्छिन्, ‘अनमोल केसी, प्रदीप खड्का, पल शाह, सलिनमान बनियाँ पनि खुब मन पर्छ । उहाँहरुको जोडी भएर काम गर्न चाहन्छु ।
पोखरामा सुपरम्यान जिपलाइन शुरू, विश्वकै भिरालो दाबी
कम्मरमा विशेष प्रकारको डोरीसहितको फुलबडी आर्नेस बाँध्यो । फलामको लठ्ठामा जमिनतिर फर्किएर झुण्डियो । चराले
नव इन्द्रेणी युवा क्लवले हाल्यो बुङकोटमा पिङ
मदन विश्वकर्मा : गोरखाको शहीदलखन गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बुङकोटमा युवाहरुले पिङ हालेका छन् ।
गोरखा संग्रहालय दशैँ तिहारमा तीन : तीन दिन मात्रै बन्द हुने
गोरखा संग्रहालय बिदाको दिन पनि खुल्ने भएको छ । बिजयादशमीको अवसरमा फुलपाती सम्म संग्रहालय खुल्ने
आज बडादसैंको तेस्रो दिन, चन्द्रघण्टा देवीको पूजा
आज बडादशैं अर्थात नवरात्रिको तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिंदैछ । देवी भागवत पुराणमा आश्विन
चीनमा मुस्लिम महिलालाई ह्वाट्स एप र जिमेल प्रयोगमा बञ्चित
हालसम्म कोरोना संक्रमित ९ लाख नाघे, परीक्षण संख्या आधा करोड नजिक
बाढी–पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुग्यो, ३१ जना बेपत्ता
लियो ३२५ बि वान को यो वर्ष पहिलो परिषद बैठक कात्तिक १२ र १३ गते गोरखामा हुँदै
बालबालिकालाई कात्तिक ७ र ८ गते भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइने
बाढीपहिरो पीडितलाई यथासीघ्र राहतको खाँचो
अप्रत्यासित विपत व्यवस्थापनमा जुट्न कांग्रेस गोरखाको आग्रह
यो वेवसाइट गोरखाबाट प्रकाशित भएको पहिलो दैनिक पत्रिका दरौँदी दैनिक पत्रिकाको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सम्पादक: नरहरी सापकोटा
अध्यक्ष: किशोर जङ्ग थापा
संवाददाताः आशिष कुमार भट्ट
संवाददाताः मदन विश्वकर्मा
गोरखा नगरपालिका ६ शक्तिचोक गोरखा
फोन : +97764421510
Designed By :Web House Nepal